Acute esingamahlalakhona semithambo - isimo kunalokho nzima futhi ezisongela ukuphila ukuthi kubangelwa ukwephulwa jikelele noma wendawo kwegazi. Ngenxa yalokho kwalolo hlelo zokugula kwegazi abakwazi ukunikeza lemali edingekile of-mpilo izicubu kuhambisana umonakalo futhi ngezinye izikhathi nokufa amaseli.
Acute esingamahlalakhona semithambo nezimbangela zayo
Eqinisweni, i-izimbangela zalesi simo zingase zihluke. Ikakhulukazi, esingamahlalakhona semithambo kungadalwa ukuphazamiseka permeability zabo, ukuncishiswa igazi noma kwehle ithoni izindonga isitsha. Ngokwesibonelo, ukwehluleka oyingozi semithambo ngokuvamile eba ku isizinda omkhulu ukopha, ezinzima kuhlasimulise okulimala ebuchosheni noma umzimba ezivamile. Umphumela efanayo kungabangela abanye isifo senhliziyo. Izizathu lihlanganise ubuthi ubuthi eziyingozi, izifo ezinzima ezithathelwanayo, ukusha ebanzi, ephelezelwa ukushaqeka esingamahlalakhona adrenal. Ukwahlukana thrombus ingase futhi avuse elibangelwa ukwehluleka, uma ihlule ngokuphelele amabhlogo ukugeleza kwegazi.
Izimpawu ukwehluleka oyingozi kwegazi
Ngo inqubo yokwelapha yesimanje sehlukaniswe izimpawu ezintathu eziyinhloko. Acute esingamahlalakhona semithambo, kuye ngobucayi isimo lesiguli kanye izizathu ngendlela, kungase kuhambisane nakwisyncope, nciphisa futhi ukushaqeka:
Yokufikelwa - emfushane eside nokulahlekelwa ukwazi, asathuthuka e-zangokwasemuva zezinhlelo ukuntula yesikhashana wegazi (ne-oksijini) ebuchosheni. Empeleni, kuba ukubonakaliswa elula esingamahlalakhona semithambo. Ngokwesibonelo, ukwesaba kungaba ngenxa ushintsho abukhali isikhundla, sebuhlungwini obunzima, noma ukucindezeleka ngokomzwelo. Kulokhu, izimpawu Lingase lihlanganise isiyezi, ubuthakathaka jikelele kanye isikhumba okhanyayo.
Ukuwa okufanayo unya abukhali wegazi izinkomba okungenzeka kubangelwe ukulahlekelwa evamile ithoni semithambo. Izizathu kuleli cala zibandakanya ubuhlungu eqinile abukhali, edonsa kunemithi noma amaphilisi owaphuzayo nezidakamizwa.
Shock - ngempela usesimweni esibucayi ukuthi kungahle kubangelwe ukuhlukumezeka okukhulu, ekulahlekelweni inani elikhulu legazi, Ukungena umzimba ushevu nomzimba (ukushaqeka anaphylactic). Izizathu kungaba futhi ukusha kuchasiselwe.
Kunoma ikuphi, ukuba nesiyezi, ubuthakathaka, ukulahlekelwa okwesikhashana ukwazi - ke kuba yisikhathi okubiza udokotela.
Acute esingamahlalakhona semithambo: Usizo lokuqala
Uma kukhona izinsolo esingamahlalakhona semithambo isidingo esiphuthumayo ukubiza i-ambulensi, ngoba kukhona njalo amathuba umonakalo ezinzima engelapheki ingqondo. Isiguli ulaliswe, ephakamisela imilenze - lokhu kuzokwenza ngcono kwegazi emzimbeni elingaphezulu. Nemilenze kumele ibe nemfudumalo basihlikihle likagologo. Lapho nakwisyncope kumele inikwe isiguli iphunga ammonia - oyoziletha ukuba ngiqaphele. It is ibuye Kunconywa ukuba pholisa igumbi (lokhu kuzokunika isamba esengeziwe sika-oksijini) nokukhulula indoda kusukela izingubo Friend evimbela ukuba ngiphefumule.
Khumbula ukuthi udokotela kuphela Ungabeka ithole ukuxilongwa okufanele kanye ukunquma kobukhulu isimo lesiguli. Ukwelashwa nokuvikelwa esingamahlalakhona semithambo incike nezimbangela zayo futhi athunyelwe ukukhululeka izimpawu ezinkulu ukuzinza kwegazi, kanye nokukhishwa imbangela eyinhloko.
Uchungechunge oluthi "Frodo": abalingisi, izindima, sakhiwo
Ingabe kufanele ngithenge umqapha we-Philips? Ukubuyekezwa kwamamodeli amahle nokubuyekezwa
Tatiana Totmianina: Biography of a skater sibalo. ukuhlukumezeka Sinzima nokululama okwengeziwe
MPS - Iyini?